Linux 5.15 yakazomakwa se "refu" (LTS) vhezheni | Linux Addicts
Linux 5.15 yakazopedzisira yamakwa se "refu" (LTS) vhezheni
Hungwaru. Zvakataurwa. Takanga takazvimirira, asi taisaziva kuti zvaizoitika rini. Linux 5.15 yakavhurwa pakutanga kwaNovember, uye vakakurumidza kutaura kuti yaizova shanduro yeavo vanotsigirwa kwenguva yakareba. Zvingangoita kuti sarudzo yakaitwa yekuve neLTS vhezheni muna 2021, asi chakakosha ndechekuti yaizove inotsigirwa vhezheni kwenguva yakareba kupfuura yakajairwa kuburitswa. Asi, kusvika nguva pfupi yadarika, ruzivo chete rwataive narwo pamusoro parwo yaive mimwe mishumo.
Nhasi, Ndira 16, mbiri dzeLinux kernel dzakaburitswa. Iyo yakanyanya kugadzikana vhezheni ndeye Linux 5.16.1, uye ivo vanochengeta kernel vanokurudzira kutorwa kwevanhu vakawanda mushure mekutanga poindi yekuvandudza. Panguva imwecheteyo vakaburitsa Linux 5.15.15, uye sezvauri kuona mumusoro skrini kana kuenda kernel.org, iyo "yenguva refu" yakafanana neLTS inotooneka padivi payo (Yakareba Nguva Tsigiro).
Pakutanga, Linux 5.15 ichatsigirwa kusvika pakupera kwa2023
Mazuva maviri apfuura takadzokorora yerunyerekupe rwuri padyo nenhau dzakavimbisa kuti Ubuntu 22.04 yaizoshandisa Linux 5.15, chaizvo nekuti ishanduro yeLTS. Ikoko isu takashuma zvakare kuti iyi vhezheni yeLinux kernel ichatsigirwa kusvika Gumiguru 2023, kunze kwekunge zvirongwa zvachinja uye mumwe munhu afunga kuzvichengeta kwenguva yakareba sezvakaitika ne5.10. Kana vakasawedzera rutsigiro, Jammy Jellyfish anosara aine kernel isina kutsigirwa 18 mwedzi mushure mekuburitswa kwayo. Asi usavhunduka: nekukasira, Canonical inogadziridza kernel yeshanduro dzayo dzeLTS kunze kwekunge shanduko dzaitwa nemushandisi.
Pakati pezvitsva zvakaunzwa neLinux 5.15 isu tine Tsigiro yemuno yeNTFS faira system kana kutsigirwa kwakagadziridzwa kwemachipi akasiyana kana maSoCs, kusanganisira Apple's M1. Ndinozivawo yakadonhedza rutsigiro rwekushandisa NTLM, saka haichakwanise kushandiswa pane Hardware ichiri kushanda neshanduro dzekare dzeSamba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Linux 5.15 yakazopedzisira yamakwa se "refu" (LTS) vhezheni
Faker.js yakava chirongwa chinodzorwa nenharaunda